Ballymurn Indlu entle kwilali yaseIreland - I-Airbnb
Ballymurn Indlu entle kwilali yaseIreland
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAdam
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAdam iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
'I-Lizzies Cottage' yindlu yakudala yaseIreland kuMzantsi Mpuma onelanga. Umhombiso ukhaphukhaphu kwaye wale mihla unekhitshi elifakwe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela, ibroadband enesantya esiphezulu, iTV yescreen esicaba (iNetflix kuphela) kunye neDVD Player kwigumbi elahlukileyo leTV, ngelixa igcina imvakalelo yemveli enendawo yomlilo evulekileyo. Igumbi lokulala eliphambili linebhedi ephindwe kabini, igumbi lesibini lineebhedi ezimbini zomntu omnye kunye nebhedi eyongezelelweyo yokukhupha. Igumbi likamabonakude nalo linebhedi yesofa ukuba iyafuneka .
'I-Lizzies Cottage' iye yahlaziywa ngokupheleleyo kwaye yahonjiswa ngaphakathi nangaphandle ukuya kumgangatho ophezulu kakhulu kubandakanya nomgangatho omtsha kuyo yonke indawo, ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo elinetafile yokutyela yokuhlalisa iindwendwe kunye negumbi lokuhlambela elitsha kraca. Ihombise ikumgangatho ophezulu njengoko zinjalo iimpahla, ukudibanisa ukuphila okutofotofo kunye nexesha langoku kunye nemvakalelo yemveli njengoko ugoqa ecaleni komlilo ovulekileyo. I-Lizzies cottage 'yindawo evalelweyo, ipropathi yabucala emi kwindawo entle yaseWexford esemaphandleni kwaye inika uxolo olupheleleyo kunye nokuzola. Imihlaba ivaliwe, ibekwe kwingca kwaye ibekwe yimithi evuthiweyo kwindawo yeehektare eneendawo zokupaka zabucala ezingaphandle kwendlela ekhoyo kwi-drive.
IBallymurn yilali entle kwi-County Wexford ebonelela ngepub, ivenkile kunye nesikhululo sepetroli. Le lali iphakathi kwe-Enniscorthy yembali kunye nedolophu yaseWexford, zombini zikumgama wemizuzu engama-20 kwaye zibonelela ngonyango olubalaseleyo lokuthengisa kunye namathuba okubona. Ukongeza, ilali yimizuzu eli-10-15 kuphela ukusuka esiphelweni sendlela entsha esuka eDublin. Unxweme lukumgama wemizuzu engama-20 kwaye lubonelela ngeelwandle ezintle eCurracloe kwaye ikufuphi neRaven Wood yolondolozo lwendalo, ilungele ukuhamba, ukubaleka kunye nokukhwela ibhayisekile. Okufumanekayo kufutshane nokuloba, ukukhwela ihashe, ukukhwela umlambo kunye nechweba lokuhamba ngenqanawa kunye ne-kayaking, ii-pubs zelizwe kunye neendawo zokutyela kwiilali zaseBallymurn naseBallaghkeen kunye nethiyetha, iikonsathi zecinema kunye nobomi basebusuku e-Enniscorthy naseWexford Town.
Ihlala ikhona ukuphendula nayiphi na imibuzo, ungaqhagamshelana nathi ngefowuni okanye i-imeyile.